Ikunceda njani i-Twitter ukuqhuba ukuThetha ngokuBanzi | Martech Zone
NgoMvulo, Septemba 15, 2014 Douglas Karr
Kukho utshintsho olukhulu olwenzekayo kumzi mveliso weendaba zentlalo onomdla. Isakhono sokutyhala ukubandakanyeka ngokuthe ngqo kunxibelelwano lwasentlalweni kunokuba ubhekise ukugcwala kwabantu kwindawo yakho. Wonke umntu uyazi ukuba ngalo lonke ixesha ubuza umntu ukuba acofe, kukho ukulahla kwinqanaba lokuphendula.
Kwinkampani ekhuthaza iimveliso okanye iinkonzo zabo kuTwitter, ukwenza ukuba umsebenzisi asuke kwintengiso ye-tweet, ukuya kwiphepha lemveliso, kwiphepha "lokufaka kwinqwelo", kwiphepha lokuhlawula, kuthengiso lokugqibela kuya kukhokelela ekushiyekeni okuphezulu. I-Twitter iyanceda ngoncedo oluthile Amakhadi e-Twitter kwaye i Thenga kwiTwitter iqhosha.
Amakhadi e-Twitter vumela abathengisi ukuba banamathisele iifoto ezityebileyo, iividiyo kunye namava eendaba ukuqhuba ukuzibandakanya. Nanku umzekelo we Ikhadi lomdlali:
Qhagamshela kwaye ufumane: Ibali le-Twitter ngo-1: 40 http://t.co/TRRiDAbkUR
-Intengiso ye-Twitter (@TwitterAds) Novemba 8, 2013
Ukuba ungathanda ukuvavanya Amakhadi e-Twitter phandle, Andihoyi -Umlingane weNtengiso yeQonga ku-Twitter-usungule isisombululo se-beta usebenzisa indlela yolawulo lomxholo. Abathengisi banokudala amakhadi kunye namaphepha endawo ngaphandle kokubhala ikhowudi besebenzisa ujongano lwabo. Abathengisi bajonge ukuqhuba iziphumo zexabiso eliphezulu njengokubukwa kwevidiyo, ukuvelisa okukhokelayo, kunye nokuthenga ngoku ngoku kunokudala ukwahluka okuninzi ukufumana indibaniselwano ephumeleleyo yezihloko, imifanekiso, ikopi, ii-URLs, kunye namaqhosha okubiza isenzo.
Umyili weKhadi le-Twitter
Umboniso weKhadi leTwitter
I-Igniter iphepha lokuya kwindawo yesiqhelo liza neethegi zokuguqula i-Twitter esele zidityanisiwe Ezi thegi zokuguqula zenza ukuba abathengisi bakwazi ukulandelela uguquko kwizixhobo nakutyelelo oluninzi, ebelingenakwenzeka ngaphambili kwintengiso yedijithali, imodeli yokujonga okufana namandla, ekhuthaza kakhulu ukusebenza kwentengiso yokufumana. kwaye uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphumelele
I-Twitter ikwavavanya i iqhosha lokuthenga ngokuthe ngqo ngaphakathi kumsinga, inkqubela phambili enomdla kubaqeqeshi becommerce. Ayisiyonto imnandi nje ngenxa yokusebenziseka ngokulula, ikwalungile kuba abathengi banokugcina ulwazi lwabo lokuhlawula ngokukhuselekileyo kwi-Twitter kwaye akufuneki ukuba bangenise ulwazi rhoqo kwisitora ngasinye abanqwenela ukwenza ushishino nalo.
Eli linyathelo lakwangoko ekusebenzeni kwethu kulwakhiwo kwi-Twitter ukwenza ukuthengwa kwezixhobo eziselfowuni kube lula kwaye kube lula, ngethemba lokuba kuyonwabisa. Abasebenzisi baya kufumana ukufikelela kunikezelo kunye nentengiso abanakufumana naphina kwenye indawo kwaye banokwenza ngokukuko kwi-Twitter zokusebenza ze-Android kunye ne-iOS; abathengisi baya kufumana indlela entsha yokuguqula ubudlelwane obuthe ngqo abakha nabalandeli babo kwintengiso.
tags: Thenga kwi-tweetindivaUmxubeikhadi lomdlaliIvenkileIgniterTwitteriqhosha lokuthenga le-twitteramakhadi e-twitterIqonga lokuThengisa ngeTwitter